१४ वर्ष वित्यो तर ३३ सय जना अझै आएनन, यी मानिस कहा हराए ? - Aarthiknews
१४ वर्ष वित्यो तर ३३ सय जना अझै आएनन, यी मानिस कहा हराए ?
काठमाडौं । विस्तृत शान्ति सम्झौतामार्फत सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य भएको पनि शुक्रबार १४ वर्ष बितेको छ। तर, द्वन्द्वकालमा राज्य र तत्कालीन विद्रोही पक्षबाट बेपत्ता पारिएका नागरिकको खोजबिन अझै भएको छैन। ३ हजार ३ सय नागरिक बेपत्ता पारिएको उजुरी आयोगमा परेको छ। पीडित पक्षको दाबीअनुसार सरकारबाट बेपत्ताको संख्या १ हजार १५ छ।